Isibuyekezo se-OneDrive Sizokwenza Ukwabelana Ngefayela Kungabi buhlungu Kakhulu
Ukwabelana ngamafayela asuka ku-OneDrive maduzane kuzoba lula futhi kusheshe, njengoba iMicrosoft okwamanje isebenzela ukuvuselela isevisi yayo yokugcina amafu.
Ngokusho kokuthunyelwe kumephu yomgwaqo yeMicrosoft 365, isiqhwaga sesoftware maduze sizovumela abasebenzisi ukuthi baphine futhi bahlele kabusha imitapo yolwazi eyabiwe. Uma lesi sici esisha sitholakala ngenyanga ezayo, kuzoba lula kubasebenzisi ukuphatha uhlu lwezindawo abasanda kufinyelela kuzo noma abavule kuzo ifayela.
Abasebenzisi be-OneDrive bazophinde bakuthole kulula ukuqhubeka lapho begcine khona njengoba bengakwazi ukuphina imitapo yolwazi yabo esetshenziswa njalo kumenyu engakwesokunxele.
Nakuba kungesona isibuyekezo esikhulu, kungase kubonakale kuwusizo ikakhulukazi kulabo abathembele kumathuluzi okubambisana aku-inthanethi e-Microsoft nesofthiwe yasehhovisi njengengxenye yokuhamba komsebenzi wabo kwansuku zonke, njengoba ngeke kudingeke bachithe isikhathi bezama ukuthola ifayela elithile noma umtapo wolwazi owabiwe. .
Engeza kuzinqamuleli ze-OneDrive
Kwesinye isihloko, iMicrosoft imemezele ukuthi abasebenzisi bensizakalo yayo yokugcina amafu maduze bazokwazi ukuhlela izinqamuleli zabo "Engeza ku-OneDrive".
Ngokufana nekhono lokuphina nokuhlela kabusha amalabhulali abiwe, lesi sici esisha sokuphatha ifayela sizotholakala ngenyanga ezayo futhi ngaso, abasebenzisi bazokwazi ukususa izinqamuleli zabo ukusuka kufolda ethi "Engeza ku-OneDrive" baye kunoma iyiphi ifolda eyimfihlo ekholelwa ku-OneDrive.
I-Microsoft ichithe ingxenye enhle yalo nyaka yengeza izici ezintsha nokusebenza ku-OneDrive futhi kuzojabulisa ukubona ukuthi iyiphi intuthuko inkampani esigcinele yona ngenkonzo yayo yokugcina amafu ngonyaka ozayo njengoba abantu abaningi beqala ukuthuthukela ku-Windows 11. .
Ingabe ufuna ukuhambisa amafayela akho efwini? Bheka ukuhlanganiswa kwethu kwesitoreji samafu esingcono kakhulu nesipele samafu esingcono kakhulu.